नदिजन्य पदार्थ विक्रीको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।
बिदा तथा खोप सम्बन्धमा ।
दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।
शिक्षा शाखाको बिदा सम्बन्धी सूचना ।
श्री रुपीकन्या प्राथमिक विद्यालय, बौदीकाली-६, नरममा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु
श्री जनता आधारभूत विद्यालय, बौदिकाली-६, नरमको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
श्री सर्वप्रिय आधारभूत विद्यालय, बौदिकाली-४, रुचाङ्गको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
शिक्षा शाखाको जाडो बिदा सम्बन्धी सूचना ।
१८ वर्ष माथिका सबै गाउँपालिका बासीहरुलाई कोभिड-१९ विरुद्धको एस्ट्राजेनिका तथा कोभिडसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।
संक्षिप्त सूची र परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।
Invitation for Bids for the Construction of6No. Ward Office
श्री धर्मात्मा माध्यमिक विद्यालय, बौदिकल१इ मिथुकरमको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
नदिजन्य पदार्थ बिक्रिका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।
श्री बालकल्याण आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-२, डेढगाउँको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
बौदीकाली गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविवरण
बौदीकाली गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।
श्री लोकप्रिय आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-४, रुचाङ्गमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
सुपरिवेक्षक र गणक पदको लागि उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लागि सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।
सुपरीवेक्षक तथा गणक पदको संक्षिप्त सूची र परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
श्री बालकल्याण आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-२, डेढगाउँमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
श्री शारदा मा.वि, बौदीकाली-३, रकुवाको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ।
मतदाता नामावली संकलन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।
संक्षिप्त सूची र परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
प्रस्तावना पेश गरी कार्यक्रम माग गर्न सबै विद्यालयहरुलाइ जानकारी सम्बन्धमा ।
कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।
कृषि विकास शाखाको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।
श्री उत्तम बालहित आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-५, बबकको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
श्री दुर्गा प्राथमिक विद्यालय, बौदीकाली-३, रकुवाको कार्यालय सहयोगी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
श्री सर्वप्रिय आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-४, रुचाङ्गको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
श्री उदय प्राथमिक विधालय, बौदीकाली-६ नरमको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
बौदीकाली गाउँपालिका, पशुपन्छी विकास शाखाद्वारा विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Fri, 01/21/2022 - 10:43
Read more about नदिजन्य पदार्थ विक्रीको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।
Submitted on: Thu, 01/20/2022 - 15:30
Read more about बिदा तथा खोप सम्बन्धमा ।
Submitted on: Thu, 01/20/2022 - 11:56
Read more about दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।
Submitted on: Wed, 01/12/2022 - 16:14
Read more about शिक्षा शाखाको बिदा सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Tue, 01/11/2022 - 14:38
Read more about श्री रुपीकन्या प्राथमिक विद्यालय, बौदीकाली-६, नरममा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Mon, 01/10/2022 - 13:31
Read more about कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु
Submitted on: Sun, 01/09/2022 - 12:26
Read more about श्री जनता आधारभूत विद्यालय, बौदिकाली-६, नरमको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Sun, 01/09/2022 - 12:25
Read more about श्री सर्वप्रिय आधारभूत विद्यालय, बौदिकाली-४, रुचाङ्गको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Fri, 01/07/2022 - 15:44
Read more about उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Fri, 01/07/2022 - 11:25
Read more about शिक्षा शाखाको जाडो बिदा सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Tue, 01/04/2022 - 15:36
Read more about १८ वर्ष माथिका सबै गाउँपालिका बासीहरुलाई कोभिड-१९ विरुद्धको एस्ट्राजेनिका तथा कोभिडसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।
Submitted on: Mon, 01/03/2022 - 17:17
Read more about संक्षिप्त सूची र परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।
Submitted on: Mon, 01/03/2022 - 16:36
Read more about Invitation for Bids for the Construction of6No. Ward Office
Submitted on: Mon, 01/03/2022 - 12:49
Read more about श्री धर्मात्मा माध्यमिक विद्यालय, बौदिकल१इ मिथुकरमको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Mon, 01/03/2022 - 11:16
Read more about नदिजन्य पदार्थ बिक्रिका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Sun, 01/02/2022 - 10:47
Read more about सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।
Submitted on: Fri, 12/31/2021 - 15:04
Read more about श्री बालकल्याण आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-२, डेढगाउँको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Fri, 12/31/2021 - 12:25
2.2.1 को 2,3.pdf
Read more about बौदीकाली गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविवरण
Submitted on: Wed, 12/29/2021 - 11:06
Read more about बौदीकाली गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Wed, 12/29/2021 - 10:15
Read more about श्री लोकप्रिय आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-४, रुचाङ्गमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Sun, 12/26/2021 - 15:43
Read more about सुपरिवेक्षक र गणक पदको लागि उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Mon, 12/20/2021 - 16:06
Read more about उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लागि सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Mon, 12/20/2021 - 16:04
Read more about सुपरीवेक्षक तथा गणक पदको संक्षिप्त सूची र परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Mon, 12/20/2021 - 10:08
Read more about श्री बालकल्याण आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-२, डेढगाउँमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Wed, 12/08/2021 - 14:11
Read more about श्री शारदा मा.वि, बौदीकाली-३, रकुवाको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Sun, 12/05/2021 - 16:18
Read more about उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ।
Submitted on: Sun, 12/05/2021 - 09:50
Read more about सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Thu, 12/02/2021 - 11:29
Read more about मतदाता नामावली संकलन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।
Submitted on: Wed, 12/01/2021 - 12:47
Read more about संक्षिप्त सूची र परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Mon, 11/22/2021 - 11:33
कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रस्ताव माग.pdf
Read more about प्रस्तावना पेश गरी कार्यक्रम माग गर्न सबै विद्यालयहरुलाइ जानकारी सम्बन्धमा ।
Submitted on: Tue, 11/16/2021 - 15:53
Read more about सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Tue, 11/16/2021 - 10:56
Read more about कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।
Submitted on: Tue, 11/16/2021 - 10:33
Read more about कृषि विकास शाखाको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Sun, 11/14/2021 - 15:19
Read more about श्री उत्तम बालहित आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-५, बबकको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Sun, 11/14/2021 - 11:45
Read more about श्री दुर्गा प्राथमिक विद्यालय, बौदीकाली-३, रकुवाको कार्यालय सहयोगी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Sun, 11/14/2021 - 11:41
Read more about श्री सर्वप्रिय आधारभूत विद्यालय, बौदीकाली-४, रुचाङ्गको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Thu, 11/11/2021 - 12:44
Read more about श्री उदय प्राथमिक विधालय, बौदीकाली-६ नरमको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
Submitted on: Sun, 10/31/2021 - 13:32
Read more about बौदीकाली गाउँपालिका, पशुपन्छी विकास शाखाद्वारा विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
शाखागत समिक्षा प्रतिवेदनहरु
बुदाँ नं. ५.pdf
Read more about समिक्षा प्रतिवेदनहरु
आ.व. २०७७/०७८ को आय र व्ययको विवरण
मिति: 12/20/2021 - 10:42
गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवा कतिको प्रभावकारी छ ?
© 2022 बौदीकाली गाउँपालिका